तिथि मेरो पत्रु »5विजयी वैवाहिक सञ्चार बाधा गर्न चाल्नुपर्ने कदम
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Dec. 13 2019 |2मिनेट पढ्न
जोडे अनिवार्य बाटो संचार अडचनों सामना, तिनीहरूले भर्खरै डेटिङ वा सँगै दशकहरूमा जन्मोत्सव मनाउने हुनुहुन्छ कि. यी missteps चाहेअनुसार मोड्न गाह्रो हो र दुवै साझेदार बाट सचेत प्रयासको आवश्यकता. निम्न सुझावहरू सम्झँदा ती अन्तिम असहमति उपयोगी साबित हुनेछ:
1. मौन उपचार जोगिने: महिला र पुरुष दुवै यो चाल को दोषी छन्, र यो अविश्वसनीय खतरनाक र विनाशकारी छ. बन्द हुँदै अनिवार्य आफ्नो साझेदार बाहिर बन्द हुँदै छ, र छैन हात मा वास्तविक मुद्दा सम्बोधन गर्न लाभदायी छ. रूपमा कडा यसलाई लाग्न सक्छ रूपमा, आफ्नो भावना देखाउन आफ्नो शब्दहरू प्रयोग, र विशिष्ट प्राप्त गर्न नडराऊ. सम्झना, सही व्यक्ति सम्बन्ध समस्याहरूको मा तपाईं संग काम गर्न जाँदैछन् छ, तपाईं विरुद्ध खरखजाना रूपमा आफ्नो भावना प्रयोग छैन.
2. मान्यताहरु नगर्नुहोस्: मौन उपचार गर्न समान, मान्यताहरु आफ्नो साथी जनमत पन्छाएर अर्को उदाहरण हो, र यो केवल छैन या त व्यक्ति निष्पक्ष छ. तपाईं आफ्नो छोटो प्रतिक्रियाहरू मतलब उसले चासो गुमाए चलाउन सक्छ, तर उनले धेरै काम मा जा हुन सक्छ. तपाईं सोध्न भने छैन र आफ्नो कल्पना मा सट्टा भर, तपाईं सत्य प्राप्त छैन, र तपाईं एकदम संभवतः अन्त मा एक ठूलो तर्क लागि आफूलाई स्थापित.
3. तारीफ राम्रो व्यवहार: तपाईं आफ्नो साथी जस्तै लाग्छ भने तपाईं अघि सकेसम्म स्नेह देखाउने छैन, सुझाव मार्फत एक मानार्थ तरिका मा यो ल्याउन प्रयास. "म साँच्चै आफ्नो अङ्कमाल प्रेम,"र, "म आफ्नो प्रारम्भिक बिहान पाठ सन्देश सम्झना,"तपाईं इच्छा को कार्यहरू प्रोत्साहन दुवै गैर खतरामा पार्ने उदाहरणहरू छन्. यो बाटो, तपाईं कुनै पनि अभियोगात्मक भाषा संग भर आफ्नो कुरा प्राप्त.
4. आफ्नो भावना आफु: पुरुष र महिला दुवै भावनात्मक हो, तर तिनीहरू पूर्ण विभिन्न तरिकामा ती भावनाहरू देखाउन गर्छन. एक महिला रुन सक्छ, र एक मानिस धूँवा सक्छ. दुवै मान्य भावनात्मक प्रतिक्रियाहरू छन्, र दुवै तिनीहरूलाई महसुस गर्ने व्यक्ति हौं. बरु आफ्नो साझेदार बताइरहेका भन्दा, "तपाईं मूर्ख बनायो,"जो एक अभियोगात्मक कथन छ, एक possessive स्वर मा आफ्नो भावना व्याख्या, र एक विवरण प्रदान.
उदाहरणका लागि, भन्दा कम झगडालु छ "तपाईं मूक गोरा मजाक बनाएको म मूर्ख महसुस", "तपाईं सधैं मलाई मूर्ख महसुस बनाउन।" पहिलो कथन पनि आफ्नो साझेदार मौका आफूलाई व्याख्या गर्न मुद्दा वास्तविक स्रोत दिन्छ र उसलाई थाहा दिन्छ.
5. सकारात्मक रहन: यो एक toughie छ, मलाई थाहा छ! यो क्रोधित तपाईं मतलब छैन कुराहरू प्राप्त वा भन्न त सजिलो छ. सकारात्मक रहन आफ्नो सर्वश्रेष्ठ गर्न र मुद्दा healthily सुल्झाउने तिर काम. पक्का, कुरा कहिलेकाँही झटका जाँदैछन्. त्यो आफ्नो जीवनमा सँगै साझेदारी दुई मान्छे को एक सामान्य भाग हो. पहिलो स्थानमा सँगै तपाईं हुनुहुन्छ कारण mindful रहन सम्झना, र बन्धन कायम ध्यान दिए.